Howlgallo ka dhan ah Shabaab oo ka bilowday Dhoobley | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Howlgallo ka dhan ah Shabaab oo ka bilowday Dhoobley
Arbaco, Marso 7, 2018(HNN) Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ururka 67-aad guutada 12-aad ee ka tirsan qeybta 43-aad Ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Dhoobley ayaa waxa ay diyaar garow balaaran ugu jiraan Howlgallo ka bilaabanaya degaanada Jubbaland.
Ciidamada oo ay u dhameystiran yihiin agabkooda ayaa waxa ay maalmihii dambe waxa ay degaano ka tirsan Jubbaland ka wadeen Howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo.
Taliyaha ururka 67-aad guutada 12-aad ee ka tirsan qeybta 43-aad Ciidanka xoogga dalka Wali Axmed Hilaac oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Ciidanka ay heegan ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen weerarada Shabaab.
Wuxuu kaloo sheegay Ciidamada ammaanka mar walba in ay diyaar u yihiin sugidda amniga iyo la dagaalanka Shabaab, isaga oo sidoo kale tilmaamay muhiim in ay tahay wada shaqeyn dhexmarta Ciidamada iyo shacabka.
Guud ahaan Gobolada dalka waxaa ka socda abaabulka iyo diyaar garowga ku aadan gulufka colaadeed ee ka dhanka ah ururka Al-shabaab, maadaama Madaxda Qaranka ay ku dhawaaqeen Dagaalka dhanka ah Shabaab.